दोस्रो दिन २८ हजारलाई कोरोनाको खोप, कसैमा छैन साइड इफेक्ट - Karnalipatra
कर्णालीपत्र संवाददाता १५ माघ २०७७, बिहीबार १९:०४
काठमाडौं । कोरोना भाइरस विरुद्धको ‘कोभसिल्ड’ खोप अभियानअन्तर्गत दोस्रो दिन ७७ वटै जिल्लामा २८ हजार ७३२ जनाले खोप लगाएका छन् । हिजोदेखि खोप लगाएका कसैलाई पनि अहिलेसम्म साइड इफेक्ट नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा ३,८४७, प्रदेश २ मा २,१६७४, बागमतीमा ११ हजार ४६१, गण्डकीमा ४, ८५३ लुम्बिनीमा २,३०३, कर्णालीमा १६७७ र सुदूर पश्चिममा २,४४१ जनाले खोप लगाएका हुन् ।
खोप लगाएको दुई दिनमा कसैलाई पनि साइड इफेक्ट नदेखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।‘आजसम्म खोप पाएका व्यक्तिहरुमध्ये कसैलाई पनि स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन,’ मन्त्रालयका डा. गौतमले भने ।
सरकारले पहिलो चरणको प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरुमध्ये खोपको उपलब्धताको आधारमा खोप लगाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी, फोहोरमैला संकलक तथा चालक, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, खोप केन्द्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवकहरु, अन्तराष्ट्रिय प्रवेश विन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी, वृद्धाश्रममा खटिने कर्मचारी तथा जेलमा रहेका कैदी–सुरक्षाकर्मीलाई पहलिो चरणमा खोप दिने मापदण्ड बनाएको छ ।
सोही मापदण्ड अनुसार खोप लगाउने अभियान देशैभर भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१५ माघ २०७७, बिहीबार १९:०४
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दुई वटै समूहलाई छलफलमा बोलाएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार नेकपाका दुई वटै समूहलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो। ‘अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको आधिकारिक प्रतिनिधिसहित छलफलमा आउन भनिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे छलफल हुन्छ।’ नेकपाका दुबै समूहबाट […]
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १२:४३
६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०९:१५
आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने
२२ मंसिर २०७६, आईतवार १३:२६
स्थानीय सरकार : नक्कली ‘भिलेजप्रोफायल’मा डेढ करोड खर्च
१३ श्रावण २०७७, मंगलवार ११:५०